Ingabe ngingaqhubeka ngiya emtholampilo ukuze ngiyohlela umndeni phakathi nalesi sikhathi se-COVID-19 naphakathi kokuvalwa kwezwe? – Messages for Mothers
Yebo. Uzokwazi ukuhlela umndeni emtholampilo wangakini. Kodwa zama ukuthola ukuthi kukhona yini okushintshile. Qikelela ukuthi uyaqhubeka nokuhlela umndeni phakathi nalesi sikhathi ukuze ugweme ukukhulelwa ungahlelile. Khumbula ukuthi ama-condom ayakuvikela ekukhulelweni, ekutholeni i-HIVnezinye izifo ezithathelwana ngocansi. Uma uhlela ukukhulelwa, kungcono ukulinda kuze kudlule inkinga ye-COVID-19.
← Ngingayivikela kanjani ingane yami kwi-COVID-19 lapho ngihlala nezihlobo futhi ezinye zingasebenzeli ekhaya? → Ngikhulelwe futhi ngisebenzisa izinto zokuthutha zomphakathi. Ingabe kufanele ngiqhubeke ngiya emtholampilo?